| कुन हिरोइनको व्वाइफ्रेण्ड को ?
Wednesday, 21 March 2018 04:44 am, Nepal
कुन हिरोइनको व्वाइफ्रेण्ड को ?
मेचीकाली : 2014-11-11 10:33:44
म कसैको प्रेममा छु,’ भन्दै आएकी नायिका नीता ढुंगानाले फेसबुकमार्फत आफ्नो ब्वाइफ्रेन्ड सार्वजनिक गरिन् । नीता त फूलै फूलको मौसम तिमीलाई फिल्ममा आफूसँगै काम गरिरहेका अभिनेता अमेश भण्डारीको प्रेममा रहिछन् । ‘प्रेम चोखो हुन्छ, फेरि साँचो माया गरेपछि किन लुकाउनु ?’ नीता भन्छिन्, ‘त्यही भएर हामीले एक–अर्काको सल्लाहमै प्रेम सार्वजनिक गरेका हौँ ।’ बजारमा त नीता र अमेशले कोर्ट म्यारिज गरिसकेको हल्लासमेत चलेको छ । तर, उनीहरू यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् ।
‘हामी प्रेममा छौँ । तर, बिहेचाहिँ गरेका छैनौँ । अर्काे वर्ष धुमधामसँग बिहे गर्ने सोच छ,’ उनीहरूको कथन छ ।
सगरमाथा आरोहण गरेरभन्दा आफ्नो प्रेमी सार्वजनिक गरेर निशा अधिकारीले बढी चर्चा बटुलिन् । केही समयअघि उनले पनि फेसबुकमार्फत आफू र क्रिक्रेटर शरद भेषवाकर गहिरो प्रेममा रहेको जनाउ दिएकी हुन् । प्रेम सार्वजनिक नगरून्जेल सबैले चियोचर्चाे गर्ने भए पनि अचेल भने उनीहरूबारे गसिप आउन बन्द भएको छ । सायद यही कारण हुन सक्छ, अचेल कतिपय हिरोइनले आफ्नो ब्वाइफ्रेन्ड गर्वका साथ सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
पूर्वमिस नेपाल मलिना जोशी र अभिनेता अनुपविक्रम शाहीको अफेयरको पनि चर्चा हुने गरेको छ । ऋतु फिल्ममा अभिनय गरेकी मनिला र मेरो माया तिमीलाई, द्रव्य, हँसियालगायत फिल्मका अभिनेता अनुपबीच प्रेम फस्टाएको पनि धेरै भइसक्यो । उनीहरूको प्रेमजोडीले पनि तारिफ पाउने गरेको छ । एकताकाका निकट साथी अभिनेता भुपेन चन्द र अभिनेत्री सौजन्या सुब्बाले त घरजम नै जोडिसके । केही समयअघि निर्माता, अभिनेता रोज राणासँग निकट रहेकी सौजन्याले अन्तत: भुपेनलाई आफ्नो जीवनसाथीका रूपमा अँगालिसकेकी छिन् ।
अभिनेता सबिन श्रेष्ठ र अभिनेत्री, मोडल तथा एअर होस्टेस नम्रता झाको लभ परेको र इंगेज्मेन्ट भएको पनि धेरै भइसक्यो । बिहेचाहिँ कहिले गर्छन्, त्यो भने निश्चित छैन ।
पछिल्लो समय रेखा थापाले आफू सुदर्शन गौतमको प्रेममा रहेको बताउँदै आएकी छिन् । ‘सुदर्शनले अफर गरे त बिहे गर्थें,’ रेखा भन्ने गर्छिन्, ‘हात भएकाले त मलाई पीडा मात्र दियो । तर, हात नभए पनि सुदर्शनले मलाई माया दिएको छ ।’ सुदर्शन भने विवाहित मात्र नभई बच्चाका बाबु पनि हुन् । प्रेम दृष्टिविहीन हुन्छ भनेझैँ रेखा र सुदर्शन अचेल गहिरो प्रेममा छन् । दसैँ होस् या तिहार या छठ उनीहरूको लालजोडी हरदम सँगै देखिने गर्दछ ।
भित्र–भित्र प्रेम गर्ने तर बाहिर स्वीकार्न नचाहने सेलिब्रेटी पनि निकै छन् । अझ कतिपय हिरो–हिरोइन त सधैँ ‘सिंगल छु’ भन्न मन पराउँछन् । तर, भित्र भने उनीहरूको चक्कर चलिरहेको हुन्छ । कतिपयको त एकसाथ अनेकसँग ‘इस्क’ भइरहेको हुन्छ । केही हिरोहिरोइन, मोडललाई भने प्रेमीप्रेमिका म्यानेज गर्न निकै गाह्रो भइरहेको हुन्छ । ‘के गर्नु, अब लाग्दिनँ भन्छु, फेरि मन लागिहाल्छ,’ एकजना चल्तीका हिरोले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘अहिलेसम्म गलफ्रेन्ड त कति बनाएँ बनाएँ, अहिलेचाहिँ चारवटीसँग चलिरहेको छ । दुइटी त अझै लाइनमा छन् ।’ ती विवाहित हिरोको पारा त यस्तो छ भने अविवाहितले झन् के गर्लान् ? धन्न उनले ‘गर्लफ्रेन्ड’हरूसँगको फोटा देखाएनन् ।
को कसको नजिक ?
कल्पना शाही र मुकेश आचार्यले प्रेमलाई बिहेमा परिणत गरेको त धेरै भइसक्यो । उनीहरूको के कुरा गर्नु ? गायक बादल प्रसाईं र हर्षिका श्रेष्ठ केही अघिसम्म प्रेममा थिए । तर, आफू अचेल सिंगल रहेको हर्षिकाको दाबी छ । बरु भन्छिन्, ‘केही समययता म एकजनासँग नजिकिएकी छु । नामचाहिँ भन्दिनँ है । ऊ यो लाइनभन्दा बाहिरको हो ।’
निर्देशक प्रसन्न पौडेल र केकी अधिकारीको नाम जोडिने गर्दथ्यो । प्रसन्नका म्युजिक भिडियो धेरै गरेकाले उनी र केकीको अफेयर रहेको हल्ला चलेको थियो । तर, वास्तविकता भने पत्ता लागेन । केकीअघि प्रसन्न मोडल तथा नायिका सिम्पल खनालसँग ‘लिभ इन रिलेसनसिप’ मा थिए । पछिल्लो समय केकी र अभिनेता, निर्माता हसन खान निकै निकट छन् । हसन केकीलाई नजिकको साथी मात्र भएको बताउँछन् । केकीले हसनबारे के भन्छिन्, त्यो भने थाहा छैन । हसन केही समयअघिसम्म मोडल तथा राहदानी फिल्मकी सहअभिनेत्री आयुष्मा श्रेष्ठसँग प्रेममा थिए । आयुष्माले अर्कै केटासँग बिहे गरेपछि हसन बिरक्तिएका छन् ।
ऋचा शर्मा र विनय श्रेष्ठबीचको प्रेमकहानी त जगजाहेर नै छ । झन्डै आधा दशक अफेयरमा रहेका उनीहरू भिसा गर्ल रिलिजपछि छुट्टिए । त्यसपछि ऋचा र निर्देशक निश्चल बस्नेतबीचको निकटताको चर्चा हुन थाल्यो । यद्यपि, ऋचा अभिनेता गौरव पहारीसँग पनि उत्तिकै निकट छिन् । जिया केसी र भुवन केसीबीचको सम्बन्धबारे त सबैलाई थाहै छ । त्यसैगरी, सुमिना घिमिरे र नाइन ओ क्लक फिल्मका निर्माता रमेश संवेदना, निर्माता मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, सुस्मिता शाही, सगुन शाहीहरूबीच सम्बन्धको चर्चा गर्नु समय खेर फाल्नु मात्रै हो ।